महानायिका करिश्मा मानन्धरले कक्षा १२ को परीक्षा सकेपछि लेखिन् यस्तो स्टाटस…
September 24, 2021 September 24, 2021 N88LeaveaComment on महानायिका करिश्मा मानन्धरले कक्षा १२ को परीक्षा सकेपछि लेखिन् यस्तो स्टाटस…
काठमाडौं । चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले कक्षा १२ को परीक्षा सकेकी छिन् । आज १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षा सकेपछि उनले गुडबाई १२ भन्दै साथीहरुको सँगको तस्विर सेयर गरेकी छिन् । कक्षा ७ मा पढाई छाडेकी करिश्माले निकै लामो समयपछि पुनः अध्ययनलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन, ‘गुडबाई १२ ब्याचलरमा फेरी […]
राम कुमारी झाँक्रीले थुतुनाे सम्हाल्न नसक्दा अन्तरवार्ता दिँदा-दिँदै खुस्कियाे बोल्नै नहुने शब्द ….
September 24, 2021 N88LeaveaComment on राम कुमारी झाँक्रीले थुतुनाे सम्हाल्न नसक्दा अन्तरवार्ता दिँदा-दिँदै खुस्कियाे बोल्नै नहुने शब्द ….
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको जिब्रो चिप्लिएको छ । एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा क्रममा झाँक्री क्री बोल्नै नहुने शब्द बोलेर चिप्लिएकी हुन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहान्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलाले सोधेको प्रश्नमा दिक्क भएर उनी ‘हे भगवान’ भन्दै चिप्लिएर शब्द उच्चारण गरेकी हुन् । कम्युनिस्टहरुले संसारमा भगवान छन् भन्नेमा […]
१० बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा जटिलता देखियो : योगेश भट्टराई
September 24, 2021 N88LeaveaComment on १० बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा जटिलता देखियो : योगेश भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिव योगेश भट्टराईले १० बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा केही जटिलता देखिएको बताएका छन् । आज (शुक्रबार)देखि सुरु भएको कन्ेद्रीय कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै १० बुँदे कार्यन्वयनका केही ठाउँमा सहज देखिएपनि केही ठाउँमा भने जटिलता देखिएको बताएका हुन् । उनले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको […]
September 24, 2021 N88LeaveaComment on लडाकु शिविरको भ्रस्टाचार अब कानुनी प्रक्रियामा, अफ्ठ्यारोमा परे प्रचण्ड !
काठमाडौँ। लडाकु शिविरमा भएको ठूलो भ्रस्टाचारबारे आजाव बुलन्द हुने भएको छ । तत्कालिन समयमा क्यान्टोनमेन्टमा भएको भनिएको ठुलो भ्रष्टाचारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरूको नाम जोडिंदै आएको छ। पूर्व बाल लडाकुसमेत रहेका लेनिन बिष्टले विषयमा छानबीन गर्न कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन् । पूर्व बाल लडाकुका अध्यक्ष लेनिन बिष्टले प्रमाण जुटाएर कानुनी प्रक्रिया सुरु […]
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिने र मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिने तयारी भैरहेको बताइएको छ । सरकारमा मन्त्रीहरू थप्नको लागि सत्ता गठबन्धनले भागबण्डा समेत टुंगो लगाएको छ । सरकारमा केहि गैरसांसद पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छ । गठबन्धनले गरेका पछिल्ला छलफलहरूमा केहि कानुन व्यवसायीको बारेमा […]
September 24, 2021 September 24, 2021 N88LeaveaComment on सन्दीप लामिछानेको अर्को ठूलो सफलता: आईसीसी र्‍याङ्किङमा छलाङ…
काठमाडौं । नेपाली लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकपछि अर्को छलाङ मारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले सार्वजानिक गरेको नयाँ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा सन्दीपले छलाङ मारेका हुन्। एक साता अघि पहिलो पटक शिर्ष सय (९१) स्थानमा अटाएका सन्दीपले १२ स्थान सुधार गर्दै ७९ औं स्थानमा आफुलाई पुर्‍याएका छन्। सन्दिप एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा […]
दशैंको टीकाको शुभसाइत सार्वजनिक
September 24, 2021 September 24, 2021 N88LeaveaComment on दशैंको टीकाको शुभसाइत सार्वजनिक
काठमाडाैं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडादसैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । असोज २१ गते बिहीबार बिहान ११ः४६ बजे घटस्थापनाको साइत रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले ११ ः४६ बजेअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्छ । […]
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच खटपट
September 24, 2021 N88LeaveaComment on अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच खटपट
काठमाडौं । रोलिङ मिल एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले आफूलाई परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो समस्या सुनाएका छन् । सो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण यति ठूलो संख्यामा उद्योग संकटमा पर्नेबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर पनि आफ्नो समस्याका बारेमा अवगत गराएका छौं, उहाँले मलाई यो कुरा त […]
‘राजा हुन आएको’ भन्दै खीमबहादुरले श्रीपेच चोर्न खोजेपछि….
September 24, 2021 N88LeaveaComment on ‘राजा हुन आएको’ भन्दै खीमबहादुरले श्रीपेच चोर्न खोजेपछि….
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा रहेको श्रीपेच चोर्न खोजेको अभियोगमा प्रहरीले एक जना जनालाई पक्राउ गरेको छ । पश्चिम रुकुम मुसिकोट घर भएका २५ वर्षीय खीमबहादुर घर्तीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनले संग्राहलय घुम्ने क्रममा आज श्रीपेच रहेको स्थानको सिसा फुटाएर चोर्न खोजेको देखिएको छ । त्यस क्रममा सुरक्षामा खटिएका सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर […]
एमाले अध्यक्षबाट विश्राम गर्दै ओली, काे बन्दैछ अबकाे अध्यक्ष ?
September 24, 2021 N88LeaveaComment on एमाले अध्यक्षबाट विश्राम गर्दै ओली, काे बन्दैछ अबकाे अध्यक्ष ?
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा प्रष्ट भएर आफूहरु संसदीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘हाम्रो नेतृत्व, पहल र प्रयासमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली स्थापित छ । हामी त निरन्तर यसको पक्षमा उभिएका छौं ।’ हिजो राति […]